Khamrigu maaha in uu fayl-gareeyo faylasha - Waxaanu ku sameynay Spain
Khamrigu ma dhicin
Khamrigu ma dhicin markii aad bixiso
Maalinta Aabuhu way soo dhowyihiin, sidoo kale waxaan fursad u helnay inaan ku siinno calaamad yar oo aan ku qanacsanahay ninka ugu muhiimsan nolosheena. Qofkaas oo had iyo jeer nala jooga annaga iyo cidda tixraacaysa labadaba shakhsi ahaan iyo xirfad ahaanba. Waa geesin, meel kasta oo aad eegto. Continue reading
Category: Khamriga laga soo qaado Spain/Booqashooyinka waajibaadka ee Spain
Spanish Bierzo wines ayaa sii kordhaya baahida adduunka oo dhan, mana aha kaliya fadlan sida horyaalka ayaa sheegay. Dabaylaha canabka ah ee Mencía waxay kasbadeen iyada oo ku salaysan aqoonta ay u leeyihiin inay qarniyaan. Vinos del Bierzo waxaa lagu gartaa isku dheelitir dhexdhexaad ah Continue reading